PHOTOS ။ Iris Mittenaere သည်နယူးယောက်၌သူမ၏ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသော Teles RELAY နှင့်အတူအတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားနေသည်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ဓာတ်ပုံ။ Iris Mittenaere ဟာသူမရဲ့ချစ်လှစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အတူ New York မှာအတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်
PHOTOS ။ Iris Mittenaere သည်နယူးယောက်၌သူမ၏ချစ်လှစွာသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်သည်
ရက်အနည်းငယ်အတွက်, Iris က Mittenaere သူ့ကိုယ်သူနယူးယောက်တွင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအလှပသောဆံပင်ရွှေရောင်သည်အနက်ရောင်ဆံရှင်သည်ဘယ်သောအခါမျှအိပ်မပျော်သောမြို့တော်သို့ပျံသန်းသွားသည် မိမိအသစ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့၏ကုမ္ပဏီ၌တည်၏။ 26 နှစ်ကမိန်းမငယ်လေးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့လှည့်ပတ်နေပါတယ် Diego el Glaoui လို့ခေါ်တဲ့လှပတဲ့ဆံပင်ညှပ်. သူတို့ရဲ့နေထိုင်၏အစီအစဉ်တွင် : ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့်သွေးထွက်သံယိုဟယ်လိုဝင်း၊ တိုင်းရင်ပြင်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အမေရိကန်ဟင်းလျာများကိုပျော်မွေ့ရန်။ Iris Mittenaere ကရှာဖို့တောင်အခွင့်အရေးယူခဲ့တယ် Catriona Grey ကအလှမယ်iverseာ 2018.
Grosse-Pomme ၌နေစဉ်အတွင်း၊ Iris က Mittenaere နှင့်သူ၏အဖော်အနည်းငယ်ဝံ့မယ်လို့တဲ့စွန့်စားမှုဝံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ... နှစ်ခု lovebirds အားသာချက်ကိုယူနယူးယောက်ကိုကျော်ရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်း ... တံခါးများဖွင့်လှစ် ! သူမ၏ Instagram အကောင့်တွင် Miss France ဟောင်းနှင့် Miss Universe 2016 သည်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုမျှဝေခဲ့သည်။ ငါတို့အချည်းနှီးသောသူတို့ခြေကိုကြည့်ဘယ်မှာရှိရာမြို့၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းနှင့်အတူ။
Iris Mittenaere ကသူ၏ရူးသွပ်မှုကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြသည်။ နယူးယောက်ကိုနေထိုင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ မြို့၏အလယ်တွင်လမ်းများပြင်းထန်မှုရှိသည်။ သို့မဟုတ်လှပမှုကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်ဖွင့်လှစ်တံခါးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်နွေရာသီမှာမင်းကိုအကြံပေးချင်တယ်၊ ငါအေးခဲနေတယ်", ကိုပြောသည် ကြယ်နှင့်အတူ Danse ၏ယခင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Iris Mittenaere နှင့်သူမ၏ချစ်သူများသည်ပဲရစ်သို့ပြန်လာပြီးပူနွေးလာသည်ကိုမသေချာပါ။
နယူးယောက်တွင်နေထိုင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ မြို့၏အလယ်ဗဟိုတွင်၎င်း၏လမ်းများ၏ပြင်းထန်မှု၊ သို့မဟုတ်၎င်း၏လှပမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အနည်းငယ်မြင့်သည်။ ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်ဖွင့်လှစ်တံခါးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ သူကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်နွေရာသီမှာငါအကြံပေးချင်တယ်။ မင်းကိုငါ့ကိုပြောပြစေချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါအေးခဲစေတယ်
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို Iris က Mittenaere (@Irismittenaeremf) ဖြစ်ပါသည် နိုဝင်ဘာ 8, 2019 မှာ 7: 16am PST
Nous discutons avec le créateur de «Despicable Me» de la réalisation du premier long métrage d’animation de Netflix – BGR
Jeff Panacloc: "Twitter၊ ဒါကငါ့ကိုစုပ်နေတယ်။ ငါကွန်ယက်မှထွက်ခွာရန်စဉ်းစားသည်" - ဗီဒီယို
# 67 အိုင်တီသည်တစ်ချိန်ကHရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ဖြစ်သည် Leonardo DiCaprio, Brad Pitt | ဟာသ Full HD Movie 2019 - ဗီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,612